subxaanlaaah:nin u ogolaaday naagtiisa inay nimankale u galmoodaan
Subject: subxaanlaaah:nin u ogolaaday naagtiisa inay nimankale u galmoodaan Mon Apr 26, 2010 7:10 am
gaaladaan mar walba waxaa ka maqlee ama aa ka arkaysaaa wax kaa yaabiya ninkaa gaalka ah aa sawirkiisa aa u jeedaaan waaa nin xishmadii ay ka tagtay oo xayawaanada hadaaa ka daray alaah ayaaa noo xaqiijiyay إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا iyaga waa xoolihii iska daayee xoolahee ka daranyihiin alaah ayaa quraanka noogu sheegay marka aan guda galo maqaalkaan.
Haweenay u dhalatay dalka Maraykanka ayaa qaylo dhaan kadib laga
badbaadiyay ninkeeda oo ku qasbi jiray inay u galmooto rag kale, si’ay lacag uga
hesho lacagtaasina ee ninkeeda siiso haddii kale uu u diidi doono inay aragto
wiil ay u dhashay.
Kadib markii uu ku qasbay inay niman kala duwan oo ku kala nool 8 gobol oo ka
tirsan Maraykanka ay la seexato, ayay haweenaydaasi qaylo dhaan u dirsatay
boliska magaalada Chicago oo ay markaasi joogtay. Boliska ayaa xiray ninkeedii
oo kasoo jeeda gobolka Minnesota, kaasoo lagu magacaabo Clinton Danner
Haweenaydan ayaa sheegtay inuu ninkeeda galin jiray magaceeda iyo
sawirkeedaba bogga Internet-ka ee galmada, isagoo shaacinaya inay galmo doon
tahay, dabadeed waxaa soo dalban jiray rag fara-badan, kuwaasoo lacag diyaar
la-ahaa. lacagtase ay ka hesho raggaasi aya waxay u diri jirtay ninkeeda, haddii
ay diidana wuxuu wacad ku maray inaysan dib danbe u arki doonin wiil ay u
Boliska ayaa sheegay inay haweenaydan ay aad u da’a yartahay, cabsi badan-na
ka qabtay ninkeeda oo ka da’weynaa. Iyada iyo canugeeda ayaa haatan ku sugan
meel nabad ah oo aan la shaacin sababa jira awgeed. Boliska ayaa xiray ninkeeda
kadib markii ay u adkeysan weyday wax yaabaha xun xun ee uu ku qasbi jiray
Galmadii ugu danbeysay ee gabadhani sameyso ayaa waxay ka sameysay gobolka
Si kastaba ha’ahaatee ninkii qabay gabadhaan ayaa hada ku jiray xabsi, lama
oga waxa ay ku xukumi doonto Maxkamadda dalka Maraykanka, hase ahaatee waxaa
lagu soo waramayaa inuu la kulmi doono ciqaab adag.
Subject: Re: subxaanlaaah:nin u ogolaaday naagtiisa inay nimankale u galmoodaan Tue Apr 27, 2010 2:46 am
Innaalillah wainaa ilayhi raajicuun.
Waxaa weeyaan Dhaqankaas iyo Xadaaradaas aan anshaxa lahayn ayay rabaan in ay u soo dhoofiyaan Dhulka islaamka.